22 Ary nampiseho ahy reniranon’ny ranon’aina+ izy. Mangalahala toy ny vato kristaly izy io ary nikoriana avy teo amin’ny seza fiandrianan’Andriamanitra sy ny Zanak’ondry,+ 2 teo afovoan’ny lalamben’ilay tanàna. Ary nisy hazon’aina+ mamoa indroa ambin’ny folo sady namoa isam-bolana, teo amin’ny andaniny roa amin’ilay renirano.+ Ary ny ravin’ireo hazo dia ho fanasitranana ny firenena.+ 3 Ary tsy hisy ozona intsony.+ Fa ho ao amin’ilay tanàna kosa ny seza fiandrianan’Andriamanitra+ sy ny an’ny Zanak’ondry.+ Ary ireo mpanompon’Andriamanitra dia hanao fanompoana masina ho azy,+ 4 ka hahita ny tavany,+ ary ho eo amin’ny handrin’izy ireo ny anaran’Andriamanitra.+ 5 Tsy hisy alina intsony+ koa, ka tsy mila fahazavan’ny jiro na fahazavan’ny masoandro izy ireo, satria hanazava azy i Jehovah Andriamanitra.+ Ary hanjaka mandrakizay mandrakizay izy ireo.+ 6 Ary hoy izy tamiko: “Azo antoka sady marina ireo teny ireo.+ Eny, i Jehovah, ilay Andriamanitra nanome fanambarana an’ireo mpaminaniny+ tamin’ny alalan’ny fanahiny,+ dia naniraka ny anjeliny hampiseho amin’ny mpanompony izay zavatra hitranga tsy ho ela.+ 7 Ary ho avy haingana aho.+ Sambatra izay mitandrina ny tenin’ny faminaniana amin’ity horonam-boky ity.”+ 8 Izaho Jaona no nandre sy nahita izany. Ary rehefa nandre sy nahita aho, dia niankohoka hivavaka+ teo an-tongotr’ilay anjely nampiseho izany tamiko. 9 Hoy anefa izy tamiko: “Tandremo! Aza manao izao! Fa mpanompo toa anao ihany aho, ary mpanompo toa an’ireo rahalahinao izay mpaminany+ sy toa an’ireo mitandrina ny teny amin’ity horonam-boky ity. Andriamanitra no ivavaho.”+ 10 Hoy koa izy tamiko: “Aza asiana tombo-kase ny tenin’ny faminaniana amin’ity horonam-boky ity, fa antomotra ny fotoana voatondro.+ 11 Izay manao ny tsy marina, aoka izy mbola hanao ny tsy marina ihany.+ Ary aoka izay maloto mbola hatao maloto kokoa.+ Fa aoka kosa izay olo-marina+ mbola hanao ny marina ihany, ary izay masina mbola hatao masina kokoa.+ 12 “‘Ho avy haingana aho,+ ary efa etỳ amiko izay tokony havaly+ ny tsirairay araka izay ataony.+ 13 Izaho no Alfa sy Omega,+ ny voalohany sy ny farany,+ ny fiandohana sy ny fiafarana. 14 Sambatra izay manasa ny akanjony,+ mba hananany zo hankeo amin’ny hazon’aina+ sy mba hahafahany hiditra amin’ny vavahady+ ho ao amin’ilay tanàna. 15 Fa any ivelany ny alika+ sy ny mpilalao ody+ sy ny mpijangajanga+ sy ny mpamono olona sy ny mpanompo sampy ary izay tia lainga sy mpandainga.’+ 16 “‘Izaho Jesosy dia naniraka ny anjeliko hitory aminareo izany zavatra izany ho an’ny fiangonana. Izaho no faka+ sy taranak’i+ Davida, sy ilay kintan’ny maraina+ mamirapiratra.’” 17 Ary miteny tsy an-kijanona ny fanahy+ sy ny ampakarina+ hoe: “Avia!” Ary aoka izay mandre hilaza hoe: “Avia!”+ Ary aoka ho avy izay mangetaheta.+ Ary izay maniry, aoka izy hisotro maimaim-poana amin’ny ranon’aina.+ 18 “Izao no ambarako amin’izay rehetra mandre ny tenin’ny faminaniana amin’ity horonam-boky ity: Raha misy manampy+ ireo zavatra ireo, dia hampian’Andriamanitra ny loza+ voasoratra ato amin’ity horonam-boky ity ho azy. 19 Ary raha misy manaisotra teny ato amin’ny horonam-bokin’ity faminaniana ity, dia hesorin’Andriamanitra ny anjarany amin’ny hazon’aina+ sy ny tanàna masina,+ dia izay voasoratra ato amin’ity horonam-boky ity. 20 “Hoy ilay manambara izany zavatra izany: ‘Eny, ho avy haingana aho.’”+ “Amena! Avia, Jesosy Tompo ô!” 21 Ho amin’ny olona masina anie ny hatsaram-panahy tsy manam-paharoan’i Jesosy Kristy Tompo!+